Bit By Bit - Abuuritaanka wada shaqeyn xooggan - 5.3.4 Gunaanad
Wicitaanada furan waxay awood kuu siineysaa inaad xal u hesho dhibaatooyinka aad si cad u sheegi kartid laakiin inaadan xalin karin naftaada.
Hadda waxaan sidoo kale muujin karaa laba farqi weyn oo u dhexeeya mashaariicda furitaanka iyo mashaariicda xisaabinta dadka. Ugu horreyn, mashaariicda furan ee furaha ah cilmi baaruhu wuxuu tilmaamayaa ujeedo (tusaale ahaan, saadaalinta filimka filimka), halka xisaabinta bani-aadamka, cilmi-baaruhu uu qeexayo mikrotask (tusaale ahaan, kala-saarida galaks). Marka labaad, wicitaanada furan, cilmi-baarayaashu waxay rabaan faa'iidada ugu wanaagsan-sida algorithm ee ugu fiican ee saadaalinta qiimayaasha filinka, qaabka ugu hooseeya ee borotiinka, ama qaybta ugu muhiimsan ee farshaxanka hore-ma aha nooc ka mid ah isku-dhafka fudud ee dhammaan deeqaha.
Marka la eego qaabka guud ee loogu talagalay wicitaanada furan iyo sadexdaas tusaale, maxay yihiin noocyada dhibaatooyinka cilmi baarista bulshada ku haboon ee habkan? Waqtigan xaadirka ah, waa in aan qiraa in aysan jirin wax badan oo lagu guuleystey (sababo aan ku sharaxi doono daqiiqad). Marka la eego qaababka tooska ah, qofku wuxuu qiyaasi karaa habka loo yaqaan 'Peer-to-Patent style' oo loo adeegsado raadiye taariikheed oo raadinaya dukumiinti ugu horreysa si loogu sheego qof gaar ah ama fikrad. Habka furan ee loogu talagalay dhibaatada noocaan ah waxay noqon kartaa mid muhiim ah marka dukumintiyada suurtogalka ah ee la xidhiidha aysan ku jirin hal arji laakiin waxaa si ballaaran loo qaybiyaa.
Guud ahaan, dowlado badan iyo shirkado badan ayaa leh dhibaatooyin laga yaabo in ay kufilan karaan wicitaannada furan sababta oo ah wicitaanada furan waxay abuuri karaan algorithms kuwaas oo loo isticmaali karo saadaalinta, iyo saadaashani waxay noqon kartaa hage muhiim ah ee ficilka (Provost and Fawcett 2013; Kleinberg et al. 2015) . Tusaale ahaan, sida Netflix rabay inuu saadaaliyo qiyaasaha filimaanta, dawladuhu waxay rabaan inay saadaaliyaan natiijooyinka sida makhaayadaha ay u badan tahay in ay leeyihiin xadgudubyo caafimaad-darro ah si ay u qoondeeyaan khayraadka kormeerka si wax-ku-ool ah. Dhibaatada noocan oo kale ah, Edward Glaeser iyo asxaabteeda (2016) adeegsadeen wicitaan furan si ay uga caawiyaan Magaalada Boston inay saadaaliso fayadhawrka makhaayadda iyo fayaqabka nadaafadda iyada oo ku saleysan xogta laga soo xigtay Yelp faallo iyo taariikhda kormeerka taariikhda. Waxay ku qiyaaseen in qaabka saadaalinta ah ee ku guuleystay wicitaanka furan uu kor u qaadi lahaa wax soo saarka makhaayadaha makhaayadaha illaa 50%.
Wicitaanada furan ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu barbardhigo laguna tijaabiyo aragtiyaha. Tusaale ahaan, Daraasada Qoysaska iyo Fayaqabka Caruurta ayaa qiyaastay ilaa 5,000 oo carruur ah tan iyo dhalashada 20 magaalo oo kala duwan Mareykanka (Reichman et al. 2001) . Cilmi baadhayaashu waxay ururiyeen xog ku saabsan carruurtan, qoysaskooda, iyo bay'adahooda ballaadhan markay dhalayaan iyo markay da'doodu tahay 1, 3, 5, 9, iyo 15 sano. Marka la eego dhammaan macluumaadka ku saabsan carruurtaan, sida fiican ee cilmi-baadhayaashu u saadaaliyaan natiijooyinka sida cidda ka qalin jebinaysa kuleejka? Ama, oo lagu muujiyey qaab u noqon lahaa mid aad u xiiso leh cilmi-baarayaasha qaarkood, taasoo xogta iyo aragtida ay ku haboontahay inay saadaaliyaan natiijooyinkaan? Maadaama aysan jirin carruurtan midkoodna waayin da'dooda oo ku filan inay kulleejo, tani waxay noqonaysaa saadaal dhab ah, waxaana jira istaraatiijiyo badan oo kala duwan oo cilmi-baarayaashu u shaqeyn karaan. Cilmi-baaraha oo aaminsan in xaafadu ay muhiim u tahay samaynta natiijooyinka nolosha ayaa laga yaabaa inay qaadato hal hab, halka cilmi-baaraha oo diiradda saaraya qoysaska laga yaabo inay wax walba ka duwanaan karaan. Waa kuwee hababkani? Ma ogaanno, iyo habka loo ogaanayo, waxaynu ka baran karnaa wax muhiim ah oo ku saabsan qoysaska, xaafadaha, waxbarashada, iyo sinaan la'aan bulsheed. Dheeraad ah, saadaashan waxaa loo isticmaali karaa in lagu hago ururinta xogta mustaqbalka. Bal qiyaas in ay jiraan tiro yar oo qalinjabiyeyaal jaamacadeed kuwaas oo aan la saadaalin karin in ay qalinjabiyaan mid ka mid ah moodooyinka; dadkani waxay noqon karaan musharaxiin ku haboon in la dabagalo wareysiyada tayada leh iyo kormeerka qowmiyadeed. Sidaa darteed, noocan oo kale ah wicitaan furan, saadaashu maaha dhammaadka; halkii, waxay bixiyaan hab cusub oo lagu barbardhigo, lagu kobciyo, oo lagu daro dhaqamada kala duwan. Wicitaanka noocan oo kale ah maahan mid gaar ah oo lagu isticmaalo xogta ka timid Qoysaska Fragile iyo Fayo-qabka Ilmaha si loo saadaaliyo cidda u aadi doonta jaamacadda; waxaa loo isticmaali karaa in lagu saadaaliyo wixii natiijo ah ee ugu dambeyntii lagu soo ururin doono xogta xogta bulshada ee dheeriga ah.
Sida aan hore u soo qoray qaybtan, ma jirin tusaalayaal badan oo cilmi-baarayaal bulsheed ah oo isticmaalaya wicitaano furan. Waxaan u maleynayaa in tani ay tahay sababtoo ah wicitaanada furan inaysan ku haboonayn habka sayniska bulshadu caadi ahaan waydiiyaan su'aalahooda. Ku soo noqoshada abaalgudka Netflix, saynisyahanada cilmi-bulsheedku badanaa ma weydiinayaan saadaalinta dhadhanka; halkii, way waydiin lahaayeen sida iyo sababta dhadhanka dhaqameedu u kala duwan yihiin dadka ka kala yimid fasalo bulsheed kala duwan (eeg tusaale ahaan, Bourdieu (1987) ). Su'aashaan "sida" iyo "sababta" su'aashu ma u horseedaan xalalka si fudud loo xaqiijin karo, sidaa daraadeed waxay u muuqdaan kuwo liidata si ay u furaan wicitaanada. Sidaa awgeed, waxay u muuqataa in wicitaanada furan ay ku haboon yihiin saadaasha su'aasha marka loo eego su'aalaha sharaxaadda . Si kastaba ha ahaatee, aragti yididiilada, ayaa ugu baaqay cilmi-baarayaasha bulshada inay dib u fiiriyaan dopo-yada u dhexeeya sharaxaadda iyo saadaasha (Watts 2014) . Sida xadka u dhexeeya saadaasha iyo sharaxaadda sharaxaadda, waxaan filayaa in wicitaanada furan ay noqon doonaan kuwo sii kordhaya cilmi baaris bulsho.